Shaqsiga Sannadka HOL ee 2019: Qoyska Elman
Tafatirayaasha Hiiraan Online
Dad aad u yar ayaa u hura naftooda ama ku bixiya qiimaha ugu sarreeya danta-guud ee qaranka ayada oo waliba lagu jiro xaalado aad u murugsan, marka kuwa kalana ay u go'aan danahooda gaarka ah.
Qoyska reer Elman waxay caan ku noqdeen, ka sokow xirfaddii u gaar ahayd Elman Cali ee dayactirka baabuurta iyo farsamada korontada, in ay u huraan xoogooda, xoolohooda iyo naftoodaba daryeelka bulshada kuwooda ugu tabaaleysan, iyadoo ay ku muteysteen abaalmarino badan oo ay ka mid ahaayeen Gleitsman International Activist Award, International Women of Courage Award iyo Oxfam Right The Wrong Award, sidoo kale xubin ka mid ah qoyska reer Elman loo sharaxay sannaka 2019 abaal-marinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize.
Markii aanu eegnay howlaha baniaadanimo ee qoyska reer Elman ay ka qabteen dalka Soomaaliya oo dhaxal galka noqday ayeey tafatirayaasha Hiiraan Online (HOL) si buuxda isugu raaceen in reer Elman loo aqoonsado Shaqsiyadda sannadka ee 2019.
Elman Cali Axmed oo waxbaraya ardaydiisa - Halkaan ayeey ka bilaabatay barnaamijka aad loogu xasuusto Elman ee ah "Qoriga Dhig, Qalinka Qaad"
Ololaha reer Elman ee daryeelka buslasha Soomaaliyeed wuxuu la bilowday Elman Cali Axmed oo ka aasaasay xaafado ka mid ah magaalada Moqdisho goobo casri oo lagu hagaajiyo gawaarida, laguna iibiyo qalabka korontada, ka dib markii uu ka soo laabtay dalka Talyaaniga xilli aqoonyahano badan aysan wadanka dib ugu soo laaban jirin.
1990-kii markii ay bilaawdeen dagaaladii sokeeye, Elman Cali Axmed wuxuu ka adkaysan waayey dhallinyardii Soomaaliyeed oo ku mustabal-beelay dagaaladii isagoo aasaasay barnaamijka aad loogu xasuusto ee "Qoriga dhig, Qalinka qaad".
Halku-dhagga iyo fikirka ah "Qoriga dhig, Qalinka qaad" ayaa waqitigaas dadka inta badan ku ahaa wax gabaabsi ah oo aan bulshada caan ku ahayn, hase ahaatee Elman Cali ayaa wuxuu u jeeday dhibaatada haysatay dhallinyaradii waqtigaas joogtay iyo saameynta dagaalada sokeeye ku yeelan-doonaan jiilalka soo socda. Xilligaas murugsan waxaa aad u adkeyd in lagu dhiirado fikir ka hor-imaanayo rabitaankii dagaal-oogayaasha.
Ilwad iyo hooyadeed Fartuun oo la guddoonsiiyay abaalmartinta "Oxfam Right the Wrong Award"
Qab-qablaayshii dagaalku waxay ka soo horjeesteen barnaamijkii,ileyskii iyo aqoontii uu Elman Cali u gudbinayey faca soo koraya. Taasi waxay sabab u noqotay in bishii March 9-keedii 1996 Elman Cali Axmed lagu dilo magaalada Moqdisho, inkastoo aan lagu guuleysan in la dilo fikirkiisii. Nasiibwanaag ololihii uu waday Elman Cali, waxaa halkii ka sii waday afadiisii Fartuun Cabdisalaan iyo seddexdiisii gabdhood ee Almaas, Ilwaad iyo Iimaan.
Fartuun iyo seddexdeedii gabdhood waxay mareen jidkii Elman Cali oo waxay ka soo noqdeen noloshii dagganeyd ee dalka Kanada oo in muddo ah ay ku noolaayeen, ayagoo dib ugu soo laabtay Soomaaliya xilli wali ay xasilooni-daro ka jirtay dalka guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho.Waxay sii xoojiyeen Xaruuntii Elman eyagoo bixinayey adeegyo aad loogu baahnaa sida dib u habeynta nolosha carruurta dagaalka la galiyey, xannaaneyta gabdhaha la fara-xumheeyo, adeegyo bulsho oo la siiyo dadka ku nool goobo ka baxsan magaalada Muqdisho sida magaalooyinka Kismayo, Beledweyne, Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Af-gooye. Adeegyadaas waxaa laga bixin karaa falanqeyn aad u dheer, laakin waxaan ku soo koobeynaa tusaalayaal ay ka mid yihiin in ay dhallinyaro badan qorigii dhigeen ka dib ay noqdeen dad wax soo saar leh oo umadda wax tar u leh iyo in kummanaan gabdhood oo la fara-xumeeyey ay noloshoodii caadiga ahayd ku soo laabteen.
Waxaa xusid mudan in dadaalada xarunta Elman ay gaareen dunida dacaldeed iyadoo ay Fartuun iyo Ilwaad qayb ka noqdeen hogaaminta dhaq-dhaqaaqa caalimaga ah ee lagaga soo horjeedo tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha. Mar uu ka hadlayey booqashadiisii xarunta Elman ee Muqdisho, madaxa kooxda Toronto Raptors Masai Ujiri oo sannadkii 2019 qaaday koobka kubadda kolayga ee NBA wuxuu sheegay " in aan la qeexi karin dareenka ku galaya marka aad aragto xarunta Elman".
Reer Elma mid walba waxbuu kusoo kordhiyay dadka iyo dalka. Tusaale ahaan Almas waxay u badheedhay khatarta ka jirta Soomaliya iyadoo u shaqaysay Wasaarada Arimaha Dibadda gaar ahaa safaarada Somalaiya ee dalka Kenya. Iyadoo dadaalkeeda dib-udhiska wadanka sii wadda ayaa lagu dilay Almaas magaalada Muqdisho bishii November 20-keedii, 2019. Dilkaas arxan-darada ah oo aad looga xanuunsaday dal iyo dibadba.
Mar ay gabadha xuquuqda aadanaha u dooda ee Lisa Shannon ka hadashay waxtarka iyo dadnimada Almaas waxay ku sifeysay "dad jaceyl iyo dhiiranaan". Naxariista iyo geesinimada ay Lisa ku sheegtay Almaas waa mid ay ka dhaxashay aabeheed oo isna ahaa qof u naxa dadka tabaalaysan. Waxaa Elman Cali si weyn loogu xasuustaa sida uu u quudin jiray masaakiinta isagoo mararaka qaarkood la wadaagi jiray cuntada una muujin jiray kalcayl.
Iimaana oo ugu yar caruurtu uu dhalay Elman Cali ayaa waxay ku biirtay ciidanka qalabka-sida waxayna ka gaartay darajada G/le dhexe . Fartuun iyo Ilwadna waxay sii wadaan dadlaakoodii biniaadanimo oo ay wax ugu qabanayeen bulshada Soomaaliyeed.
Aan u hambalyeeyno una duceyno reer Elman oo ah qoys ku sifoobay wadaniyad ay Soomaalidu ku dhaadato.